သား | Rev.U Min Lwin
All posts tagged သား
Posted by ဦးမင်းလွင် on 13/03/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ကၽြန္, သား.	3 Comments
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများဟု အခေါ်ခံရမည့်အကြောင်း ခမည်းတော်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင် ကြလော့။ ငါတို့သည်လည်း အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်လည်း လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကို မသိသောကြောင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားများဖြစ်သည်ကို နားမလည်ကြ။ (၁ယော ၃း၁)
ဘုရားသခင်သည် သူ၏အဆုံးအစမရှိသော ကြီးမားသော မေတ္တာတော်ဖြင့် လူသားများကို သူ၏ သားသမီးများ ဖြစ်လာရန် ဖိတ်ခေါ် ခဲ့ပြီးနောက် ယုံကြည် လက်ခံသော သူတိုင်းကို သူ၏ သားသမီးများ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ သည်။ တခါတရံ ကျမ်းစာ ဖတ်သည့်အခါ ကျွန် တစ်ယောက် ကဲ့သို့ အစေခံရန် သွန်သင်သော ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်မိသည်။ ထိုကဲ့သို့ သွန်သင်ရာ၌ အခြားသော နတ်ဘုရားများ၊ ရုပ်တုများ၊ လောက အရာများထက်၊ မိမိကိုယ်ထက် ပိုမိုအစေခံရန် ညွှန်ကြား ပြောဆို ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများ၊ မဟာ အမှုတော်ဆောင် ပရောဖတ်ကြီး များနှင့် ခရစ်တော် အပါအ၀င် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကို နားလည် ခံစားသူ တိုင်းက မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏ ကျွန်များ အဖြစ်ဖေါ်ပြကြပြီး၊ သူတို့အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင် ကို အစေခံလိုသော စိတ်ဓါတ်အပြည့် အ၀ ရှိခဲ့ကြသည် (ဟေရှာယ ၄၁း၈၊ တောလည်ရာ၁၂း၇၊ ဖိလိပ္ပိ ၂း၇)။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော် တိုင်က ကျွန်တော်တို့ကို ပေးထားသော ဂုဏ် အရှိန်အ၀ါ အပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီး နေခြင်းထက် မိမိကိုယ်ကို အစေခံ တစ်ယောက် ကဲ့သို့ နှိမ့်ချလျက် အမှုတော်မြတ်တွင် စိတ်အား ထက်သန်စွာ အားကျိုး မာန်တတ် ပါဝင် ဆောင်ရွက် သင့်သည် (မာကု ၁၀း၃၅-၄၀၊ ယောဟန် ၁၂း၂၆)။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် အစေခံ လိုသော စိတ်ဓါတ်နှင့် အသက် ရှင်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း အမှန် တကယ်တွင် ဘုရားသခင်က တန်ဘိုးထားသော ဘုရားသခင်၏ သားများသာ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သော သူတို့သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်က အဘဟု ခေါ် ခွင့်ပေးပြီး ဘုရားသခင်၏ သားအရာမှာ နေထိုင်ခွင့် ရထားသော်လည်း မိမိ ကိုယ်ကိုမိမိ ဘုရားသားဟူသော အခြေအနေဖြင့် အသက်မရှင်ဘဲ ကျွန်တစ်ယောက် ကဲ့သို့ အသက်ရှင် သောသူများ ရှိနေကြပါသည်။ ထိုသူတို့၏ စိတ်ဓါတ်သည် အမွေခံသား ဟူသော စိတ်ဓါတ် မျိုးနှင့် အသက်မရှင်ဘဲ သခင်ထံမှ မျက်နှာရချင်သော ကျွန်ကဲ့သို့သာ အသက်ရှင်ကြောင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် (ဂလာတိ ၄း၂၁-၃၁) ၌ စာရာနှင့် ဟာဂရမှ ဖွားမြင်သော ဣရှမေလနှင့် ဣဇတ် အကြောင်းကို တွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။ ၄င်းတို့ နှစ်ယောက် စလုံးသည် အာဗြဟံ ဟူသော ဘခင် တဦးတည်းက ဖွားမြင်သော်လည်း စိတ်ဓါတ်များကား မတူကြချေ။ ဣရှမေလသည် ကျွန်မဖြစ်သော ဟာဂရမှ ဖွားမြင် သောကြောင့် ကျွန်တစ်ဦး ကဲ့သို့သာ အသက်ရှင်ပြီး၊ ဣဇတ်မှာမူကား စာရာမှ မွေးဖွားပြီး အမွေခံသား ဟူသော စိတ်ဓါတ်ဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူများသည် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသား အရာတွင် ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း အချို့သော သူတို့မှာ မိမိတို့ ကိုယ်မိမိတို့ အမွေခံသားဖြစ် သည်ဟု စိတ်ချမှု မရှိနိုင်ကြသေးဘဲ နှုတ်ခပတ်တော်ကို မသိကျေးကျွန် ပြုကာ ကျွန်တစ်ဦး ကဲ့သို့သာ အသက်ရှင် နေကြသည်မှာ ၀မ်းနည်း ဘွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို မိမိ၏ ဖခင်တဦး ဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်စွဲလမ်းပြီး ယုံကြည် စိတ်ချမှု အပြည့်ဖြင့် ဖခင်၏ အိမ်တော်တွင် ၀မ်းမြောက်မှု များဖြင့် နေထိုင်လျှက် ရှိသော သားတစ်ယောက်၏ အနေအထား နှင့် သခင်တစ်ဦး၏ အိမ်တွင် သခင်၏ မျက်နှာသာ ပေးမှုခံရစေရန် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေသော ကျွန်တစ်ယောက်၏ အနေအထား ကို ကျွန်တော်တို့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ကြမည်။ ပထမ တော်စပ်မှုသည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်နှင့် စစ်မှန်သော နှုတ်ခပတ်တော်များကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် မွေးဖွားလာသူဖြစ်သည်။ အခြားသော တော်စပ်မှုသည်ကား ဘုရားသခင် ကျေနပ်မှုရစေရန် တောင်းဆိုမှု မှန်သမျှကို ကျိုးစား လုပ်ဆောင်ကာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ မယုံနိုင်ခြင်းများ ဖြင့် ပြည့်နေသော သူဖြစ်သည်။
ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို မိမိ၏ ဖခင်တဦးဖြစ်သည်ဟု သိမှတ်စွဲလမ်းပြီး ယုံကြည် စိတ်ချမှု အပြည့်ဖြင့် ဖခင်၏ အိမ်တော်တွင် ၀မ်းမြောက်မှု များဖြင့် နေထိုင်လျှက် ရှိသော သားတစ်ယောက်၏ အနေအထားနှင့် သခင်တစ်ဦး၏ အိမ်တွင် သခင်၏ မျက်နှာသာ ပေးမှုခံရစေရန် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေသော ကျွန်တစ်ယောက်၏ အနေအထားကို ကျွန်တော်တို့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြမည်။ ပထမတော် စပ်မှုသည် ဘုရား သခင်၏ ကတိတော်နှင့် စစ်မှန်သော နှုတ်ခပတ် တော်များကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် မွေးဖွားလာ သူဖြစ်သည်။ အခြားသော တော်စပ်မှုသည်ကား ဘုရားသခင် ကျေနပ်မှုရစေရန် တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှကို ကျိုးစား လုပ်ဆောင်ကာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ မယုံနိုင်ခြင်းများဖြင့် ပြည့်နေသော သူဖြစ်သည်။
ကျွန်တစ်ယောက်နှင့် သားတစ်ယောက်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
မာရိနှင့်မာသ တို့၏ အသက်တာဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုခြင်း
မာသသည် ခရစ်တော်လာရောက်လည်ပတ်မှုကို ကြိုဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူသည် အရင်ကတည်းက လုပ်ဆောင်နေသော အိမ်အလုပ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကာ ခရစ်တော်ကို အချိန် မပေးနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များခဲ့သည်။ သို့သော် မာရိမှာမူကား ခရစ်တော်၏ ခြေတော်ရင်း တွင်ထိုင်ကာ စကားတော်ကို နားထောင်ရန် ဦးစားပေးခဲ့သည်။ မာသမှာမူကား ခရစ်တော် အတွက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် လျက်ပင် ငြူစူမှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်နေ သည်။ မာရိကိုပင် ပျင်းရိသူအဖြစ်မြင်လာတော့သည်။
ကိုယ့်ခွန်အားဖြင့် အမှုတော်ကို ကျိုးစားလုပ်ဆောင်နေရသည်။
ဖြောင့်မက်ခြင်းကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်သော်လည်း မှားယွင်းသော သဘောထားရှိနေခဲ့သည်။
ခရစ်တော်နှင် စပ်ဆပ်ပတ်သတ်မှုသည် သူမကို ဒုက္ခအဖြစ် သက်ရောက်စေခဲ့သည်။
မိမိကိုယ်၏ ဖြောင့်မက်ခြင်းကို ဦးစားပေးခဲ့သည်။
ခရစ်တော်ကို သူမ၏ ကောင်းမှုများအတွက် သတိအမှတ်ရစေချင်သည်။
ခရစ်တော်နှင့် အနားယူလိုသော သဘောရှိသည်။
မာသ၏ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုအတွက် ပြန်လှန်ပြောဆိုဘို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါ။ ခရစ်တော်သည် သူ၏ ဖြောင့်မက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သည်။ မျက်မြင်အရာများနှင့်အသက်မရှင်ပါ။
ဘုရားအလုပ်လုပ်ဘို့ထက် ဘုရားနှင့်အသက်ရှင်ဘို့ ပို၍ဦးစားပေးသည်။
အထက်ပါတို့သည် သားတစ်ဦး၏ အနေအထားနှင့် ကျွန်တစ်ယောက်၏ အနေအထားကို နှိုင်ယှဉ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် မည်သည့်အနေ အထားတွင် အသက်ရှင် နေပါသနည်း။ သားတစ်ဦးကဲ့သို့လော၊ ကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့လော။
ဘုရားသခင် ကောင်းကြိးပေးပါစေ။ (အာမင်)